Ukuvunyelwa kwe-EU: Ukwelashwa kokuqala kwe-Peanut Allergy - Global Allergy & Airways Patient Platform
Ukuvunyelwa kwe-EU: Ukwelashwa kokuqala kwe-Peanut Allergy
Ikhaya>Ukuvunyelwa kwe-EU: Ukwelashwa kokuqala kwe-Peanut Allergy
NgoJanuwari 2021 i-European Commission yagunyaza ukwelashwa kokuqala kokungezwani namantongomane.
Ukwethulwa kokuqala eJalimane nase-UK ngoMeyi 2021.
I-Aimmune Therapeutics 'iPALFORZIA®
I-European Commission (EC) igunyaze i-PALFORZIA® [impuphu esetshenzisiwe ye- I-Arachis hypogaea L., isidoda (amakinati)] ekwelapheni ukungezwani kwamakinati, okwenza kube ukwelashwa kokuqala kwalesi simo. Ikhishwe ngu I-Aimmune Therapeutics, I-PALFORZIA ikhonjiswa ezigulini ezineminyaka emine kuya kwengu-17 ngokuxilongwa okuqinisekisiwe kokungezwani kwamantongomane ngokuhlangana nokudla okugwema amakinati futhi kungaqhutshwa ezigulini ezineminyaka engu-18 ubudala nangaphezulu.
I-PALFORZIA isidakamizwa esiyinkimbinkimbi se-biologic esisetshenziswa ngendlela ehlelekile yokwakha eyakha ocwaningweni lwekhulu lomlomo lwe-immunotherapy (OIT). Nge-OIT, amaprotheni athile we-allergenic afakwa ekuqaleni ngamanani amancane kakhulu, alandelwe amanani akhuphukayo ngokwengeziwe, angaholela ekukwazini ukunciphisa ukusabela okweqile ku-allergen ngokuhamba kwesikhathi. I-PALFORZIA iyi-OIT ekhiqiza umuthi yokwelashwa kwamakinati ngephrofayili ye-allergen echazwe kahle ukuqinisekisa ukungaguquguquki kwawo wonke umthamo, kusuka ku-0.5mg (okulingana no-1 / 600th wamantongomane) kuye ku-300mg.
Ukuvunyelwa kwakususelwa kuphakheji yedatha kufaka phakathi izivivinyo ezibalulekile zesigaba sesi-III semitholampilo, i-PALISADE ne-ARTEMIS. Isivivinyo sihlolisise ukwelashwa kubahlanganyeli abangama-671 ngokungezwani kwamakinati eNyakatho Melika naseYurophu. Kuzo zombili izifundo, ukwelashwa kwe-PALFORZIA kuholele ekukhuleni okukhulu kwenani lamaprotheni amakinati abekezelelwayo, uma kuqhathaniswa ne-placebo. Ababambiqhaza bathole isikhathi sokuqala sokukhuphuka kwedosi amasonto angama-20 kuye kwangama-40 aqala ku-3mg kuze kufinyelelwe umthamo we-300mg. Ababambiqhaza bese bedonsa izinyanga eziyisithupha (PALISADE) noma izinyanga ezintathu (i-ARTEMIS) yesondlo se-immunotherapy nge-300mg PALFORZIA noma nge-placebo kuze kube sekupheleni kocwaningo.
“Imiphumela evela ekuhlolweni okuyisigcawu kweSigaba III sempilo iveze ukuthi ngaphezu kweziguli zeziguli ezelashwa nge-PALFORZIA zikwazile ukubekezelela okulingana nezinhlamvu zamakinati eziyisikhombisa kuya kweziyisishiyagalombili ngemuva kwezinyanga ezifika eziyisishiyagalolunye zelashwa. Le mininingwane ephoqelelayo igqamisa ikhono layo lokunciphisa ukumelana nokungezwani komzimba okunzima, kufaka phakathi i-anaphylaxis uma kwenzeka kutholakala amaprotheni amakinati engahlosiwe, ”kusho uSolwazi George du Toit, umphenyi ocwaningayo ngezilingo ze-PALISADE ne-ARTEMIS.
Ukusabalala kwamantongomane izifo, ukungezwani kokudla okuvame kakhulu ezinganeni, kuye kwaphindeka kathathu emashumini amabili eminyaka edlule. Namuhla, kuze kufike ku-2% wabantu bezingane okutholwe ukuthi bane-peanut allergies. Kodwa-ke, ukwanda kwangempela kokungezwani kokudla akwaziwa. Labo abanomlando womndeni wokungezwani komzimba, i-asthma, noma i-eczema, bangaba sengozini enkulu.
Kwenzeka kanjani ukungezwani komzimba ne-Peanut?
Ukungezwani kwamantongomane kwenzeka lapho amasosha omzimba womuntu ehluleka ukubona amaprotheni amakinati futhi ewala ngokweqile kuwo.
Izici zofuzo kepha nezici zemvelo zingachaza ukungezwani komzimba.
Umlando womndeni, izehlakalo zokuqubuka, kanye nokuvezwa kwamaprotheni we-soy kwakuxhunywe ekukhuleni kokungezwani kwamantongomane ebuntwaneni ocwaningweni olulodwa, kepha ayikho impendulo ecacile yokuthi kungani ingane eyodwa ithola ukungezwani okuthile kwamantongomane kanti enye ayitholi.
Ziyini izimpawu zokungezwani komzimba ne-Peanut?
Ukungezwani kwamantongomane kuvame ukuvela ebuntwaneni, kepha ngokomthetho kungavela noma nini. Ukusabela okungathi sína ngokwengeziwe kuvame ukuqala esemncane.
Imiphumela ivame ukuqala ngokushesha ngemuva kokuvezwa amakinati noma imikhiqizo equkethe amakinati. Izimpawu zivame ukuqala kungakapheli imizuzu embalwa yokuvezwa kepha zingadlulela emahoreni amabili.
Izimpawu zokungezwani kwamantongomane:
Ukusabela kwesikhumba njengokuqubuka, isifuba noma i-eczema
Izimpawu zamathumbu (GI) ezinjengokucanuzela kwenhliziyo, ubuhlungu besisu, ukuhlanza noma isifo sohudo
Amehlo amanzi, ukukhwehlela, noma ikhala eligijimayo
Ukwelashwa kwamantongomane kungadala ukusabela okusongela impilo. Lokhu kusabela kungandulelwa yisikhumba, i-GI noma izimpawu zokuphefumula eziphezulu, noma zingaqala ngokuzumayo.
Izimpawu zokuphendulwa kwamantongomane okusongela ukuphila:
Izimpawu zokuphefumula eziphezulu kufaka phakathi ukukhwehlela, noma ikhala eligobayo
Ukuvuvukala, okwaziwa nangokuthi i-angioedema, kwezindebe, ulimi, ubuso, noma umphimbo
Ukusabela okunamandla, okubizwa nge-Anaphylaxis, kungahle kwenzeke, kubangele ikhanda elincane, kunzima ukuphefumula, noma ukulahlekelwa ukwazi
Ukungezwani kwamantongomane kunamathuba amaningi kunezinye izinto zokwaliwa ukudla okudala i-Anaphylaxis. I-Anaphylaxis yisimo esiphuthumayo sezokwelapha esidinga ukwelashwa ngokushesha.
Iningi lokufa okuhlobene nokungezwani kokudla kuhlotshaniswa nokufakwa kwamantongomane kanye ne-Anaphylaxis.
I-AJMC: Umphumela Wezomnotho Wokungezwani Kwe-Peanut
I-EPR: IKhomishini yaseYurophu igunyaza ukwelashwa kokuqala kokungezwani namantongomane
Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-01-27T16:30:21+01:00January 12, 2021|Blog|Amazwana Off Ekuvunyelweni kwe-EU: Ukwelashwa kokuqala kwe-Peanut Allergy